अश्लीलता माथि प्रहरीको नजर ! अब पालो कसको ?? - Experience Best News from Nepal
अश्लीलता माथि प्रहरीको नजर ! अब पालो कसको ??
यूट्युवमा अश्लील अन्तरवार्ता दिएको आरोपमा प्रहरीले फुलचोकी मिडियाका सञ्चालक राजकुमार कुँवर र परी तामाङलाई पक्राउ गर्‍यो । युट्युवमार्फत अश्लीलता फैलाउनेमाथि सम्भवतः यो नेपाल प्रहरीको पहिलो एक्सन हो ।
‘वाउ नेपाल’ को उछृंखल